Fiahiana ireo tsy manan-kialofana Notolorana fanampiana ny tetsy Anosizato
Tsy fanjarian-tsakafo Mitohy ny ady
Mitohy ny ady amin` ny tsy fanjarian-tsakafo raha ny fanambaran` ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, Pr Hanitriniala Jean-Louis Rakotovao, omaly.
Herisetra ara-nofo nirongatra tato ho ato Mila beazina ny tsirairay, hoy ny mpahaitoetra
Mpiasam-panjakana matoatoa ]591 tratra, 7007 mbola hamarinina
"Tsy mifidy volon-koditra, tsy mifidy toerana aleha ny fitondram-panjakana mikaroka fanampiana sy manatanteraka asa sosialy ho an'ny vahoaka" hoy Angelica Michelle,
Minisitry ny Mponina ny sabotsy teo raha tonga teny amin'ny Akany Iarivo Mivoy nanolotra fanampiana ho an'ireo fianakaviana tsy manan-kialofana. Marihana fa napetraka vonjimaika ao amin` io akany io ireo tsy manan-kialofana noho ny fahamehana ara-pahasalamana vokatry ny coronavirus. Araka izany, vary 6525 kilao, voamaina 950 kilao ary menaka 620 litatra avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny PAM no natolotra ireto fianakaviana 80 (204 olona) ireto. Miara miasa akaiky moa ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Ministeran'ny Mponina amin` izao fiahiana ny tsy manan-kialofana izao.